A na-atụ anya ikpe Coronavirus na United States ruo 34 na ihe ndị ọzọ - New York Times - GELN RELR REL RAYR.
A ga-atụ anya ikpe Coronavirus na United States ruru 34 wee karịa - New York Times
Na United States, opekata mpe, mmadụ iri anọ na asaa bu ọrịa ọria na-agbasa na China, ndị ọrụ gọọmentị etiti kwuru na Fraịde.
Achọpụtara iri na atọ nke ọrịa ahụ na ndị njem adaa ọrịa mgbe ha si mba ọzọ lọta, mmadụ 21 n'ime ndị 'Ngalaba Steeti' kpọghachitere.
Dr. Nancy Messonnier, onye isi otu mba na-ahụ maka oria ọgwụ na ọrịa akwara na Nkwupụta, Nancy Messonnier, kwuru na mkparịta ụka ndị ọzọ ga-ebuwanye ibu. .
Maka na ha nwere ike ịkpọtụrụ ndị bute ọrịa n'ụgbọ ahụ, "a na-ahụta ha nọ n'ihe egwu dị elu nke ọrịa," Dr. Mattonnier kwuru.
Passengersgbọ iri ndị ọzọ Diamond Princess nwalere ule dị mma na Japan, mana agababeghị ndị ọrịa dịka CDC enwetaghị nnwale ahụ.
Ọtụtụ ndị America na-arịa ọrịa siri ike na ọrịa ahụ n'ụlọ ọgwụ Japan. Ha so n'ime ndị njem n'ụgbọ Diamond Princess, nke ọrịa butere na ya mgbe ha bịarutere Yokahama, Japan.
Emelitere na February 10, 2020
Ọ bụ nje virus ọhụrụ aha ya bụ spikes yiri okpueze ndị na-esi n’elu ya apụta. Coronavirus nwere ike ibute ma anụmanụ ma ndị mmadụ, o nwekwara ike ibute ya ụdị ọrịa iku ume site na oyi ruo n'ọnọdụ dị ize ndụ dị ka nnukwu ọrịa iku ume ma ọ bụ SARS.
Kedu nje na-efe efe?
Dika nyocha mbu, ọ dị ka ọ na-efe efe, yiri SARS, ikuku nwekwara ike ibufe ya. Ndị ọkà mmụta sayensị na-eme atụmatụ na onye ọ bụla bu oria nwere ike gbasaa n'etiti mmadụ 1,5 na mmadụ 3,5 na-enweghị usoro nchekwa adịghị mma.
Olee otú m ga-esi nwee nchegbu?
Ọ bụ ezie na nje ahụ bụ nnukwu nsogbu ahụike ọha, ihe egwu maka ọtụtụ ndị na-abụghị China dikwa oke ala ma ọrịa oge a bụ ihe iyi egwu kachasị.
Worksnye na-arụ ọrụ ibute nje ahụ?
Ndị isi Organizationtù Ahụ Ike haiwa toro nzaghachi ike China na nje ahụ site na mechiri njem, ụlọ akwụkwọ na ahịa. Izu a, otu ndi otu ndi okacha amara nke ndi WHO rutere Beijing inye aka.
Ọ bụrụ na m ga-eme njem?
US na Australia nwa oge jụ ịbanye na ndị na-abụghị ụmụ amaala gara China na ọtụtụ na nso nso a ụgbọelu kwụsịrị ụgbọ elu.
Kedụ ka m ga - esi chebe onwe m na ndị ọzọ?
Saa aka gi na-abụkarị ihe kacha mkpa ị ga - eme ka ị nọrọ n’ụlọ mgbe ị na-arịa ọrịa.
Ruo Fraịdee, ọrịa coronavirus ahụ dịkarịa ala mmadụ 75, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na China China, wee gbuo mmadụ 000.
"Nje virus ọhụrụ a nwere nnukwu ihe egwu nye ahụike ọha," ka Dr. Messonnier kwuru.
Biko chọọ maka mmelite na akụkọ a na-emepe emepe.
Ntuli aka onye isi ala: Bloomberg na-akụda ihe ndekọ redio na TV maka onye chọrọ ịbụ onye America
Canada - Conrad Black: Gọọmentị Canada agbahapụla ibu ọrụ nke idu ya